1 Samoela 15 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (1Sam 15)
1 Samoela 15
[Ny tsy nahatanterahan'i Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny handringanana ny Amalekita, sy ny nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany] Ary hoy Samoela tamin'i Saoly: Jehovah naniraka ahy hanosotra anao ho mpanjakan'ny Isiraely olony; koa ankehitriny mihainoa ny tenin'i Jehovah ianao.
Koa mandehana ankehitriny, ka mameleza ny Amalekita, ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana, fa vonoy avokoa, na lahy na vavy, na ankizy madinika, na zaza minono, na omby, na ondry aman'osy, na rameva, na boriky.[Heb. ataovy herema]
Ary azony sambo-belona Agaga, mpanjakan'ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelan-tsabatra.[Heb. nataony herema]
Fa Saoly sy ny olona tsy namono an'i Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry aman'osy sy ny omby sy ny mifahy sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy foiny ho naringana ireny; fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa.[Heb. hatao herema]
Ary hoy Saoly: Avy tany amin'ny Amalekita no nitondrany ireny, fa ny olona namela izay ondry aman'osy sy omby tsara indrindra mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrao, fa ny sisa dia naringanay ihany avokoa.[Heb. nataonay herema]
ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe: Mandehana, ka aringano avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia aminy ambara-paharingany.[Heb. ataovy herema]
Ary Samoela nankany Rama; fa Saoly kosa niakatra tany amin'ny tranony tao Gibean'i Saoly.Ary Samoela tsy namangy an'i Saoly intsony ambara-pahafatiny; fa Samoela nalahelo an'i Saoly. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'ny Isiraely.
1 Samoela 15:1
1 Samoela 15:2
1 Samoela 15:3
1 Samoela 15:4
1 Samoela 15:5
1 Samoela 15:6
1 Samoela 15:7
1 Samoela 15:8
1 Samoela 15:9
1 Samoela 15:10
1 Samoela 15:11
1 Samoela 15:12
1 Samoela 15:13
1 Samoela 15:14
1 Samoela 15:15
1 Samoela 15:16
1 Samoela 15:17
1 Samoela 15:18
1 Samoela 15:19
1 Samoela 15:20
1 Samoela 15:21
1 Samoela 15:22
1 Samoela 15:23
1 Samoela 15:24
1 Samoela 15:25
1 Samoela 15:26
1 Samoela 15:27
1 Samoela 15:28
1 Samoela 15:29
1 Samoela 15:30
1 Samoela 15:31
1 Samoela 15:32
1 Samoela 15:33
1 Samoela 15:34
1 Samoela 15:35